Ahoana ny fomba fanesorana tasy voatabia | Bezzia
Tony Torres | 10/06/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 10/06/2021 11:01 | an-trano
Ny fanesorana ireo tasy voatabia dia mety ho sarotra tokoa, indrindra raha eo amin'ny lamba marefo ny tasy na avela ho maina loatra. Ilaina ny mihetsika haingana mba hanafoanana ny tasy voatabia tanteraka. Na izany aza, na dia tsy hitanao aza ny tasy amin'izao fotoana izao ary ora maromaro no lasa, amin'ny tetika sasany dia azo atao ny manafoana azy ireo tanteraka.
Zava-dehibe ihany koa ny fijerena ny karazana voatabia nahatonga ny tasy, satria ny voatabia voajanahary dia tsy mitovy amin'ny saosy voatabia. Ny saosy miorina amin'ny voatabia toy ny ketchup, ankoatry ny fifantohan'ny voatabia dia misy menaka, zava-manitra ary liqueur. Ka ny dingana arahana dia samy hafa kely amin'ny tranga tsirairay. Manaraka dia ho hitanao toro-hevitra vitsivitsy hanalana ny tasy voatabia.
1 Esory ireo tasy voatabia voajanahary
2 Fetsy hanesorana tasy voatabia nendasina
3 Torohevitra hafa
Esory ireo tasy voatabia voajanahary
Mora esorina ny voatabia voajanahary, satria tsy misy akora hafa na additives hafa izay manasarotra ny tasy. Saingy, tsy mitovy ny fomba fiasa raha toa ka manandrana manala tasy voatabia vaovao ianao, toy izay tasy efa maina. Amin'ny tranga voalohany tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Esory aloha amin'ny sotro ny sisa amin'ny sakafoRaha marefo ilay akanjo, dia aza asiana hery hisorohana ny fanimbana ny fibre.
Apetraho eo ambanin'ny rano mangatsiaka ny akanjo, avelao hihodina izy manomboka ao anaty ny akanjo ka hatrany ivelany.
AMPIHARO detergent kely fanasana vilia dia ahosory amin'ny rantsan-tànanao.
Sasao amin'ny rano mangatsiaka mandra-pamafana tanteraka ny sombin-drongony.
Mandrosoa mankany sasao ny lamba ara-dalàna.
Raha maina ny tasy voatabia voajanahary, mila manaraka ireo dingana ireo ianao mba hialana tanteraka aminy.
Dampen a lamba landihazo misy vinaingitra fotsy fanadiovana.
Mitandrina, apetaho amin'ny tasy voatabia mandra-pialany tanteraka.
Mandehana mampiasa faritra samihafa amin'ny lambaIzany dia hanakana ny voatabia hifindra amin'ny faritra hafa amin'ny akanjo.
Sasao amin'ny rano mangatsiaka ary sasao amin'ny milina fanasan-damba toy ny mahazatra.
Fetsy hanesorana tasy voatabia nendasina
Ny saosy voatabia voaangona dia misy singa mihoatra ny iray, izay mahatonga ny fanalana ireo tsy ilaina dia somary sarotra kokoa. tasy akanjo. Arakaraka ny ahaizanao mihetsika haingana dia mora kokoa ny hanaisanao ny tasy voatabia. Ka raha mahita tasy voatabia nendasina tamin'ny lambanao ianao aza avela ao anaty harona fanasan-damba miandry hisasana. Araho ireo dingana ireo ary azonao atao ny manala ny tasy voatabia amin'ny fitafianao.
Amin'ny mpandray afangaro amin'ny rano kely ny soda fanaova. Tokony hahazo paty voa hanadio ny tasy ianao.
Aparitaho ny paty soda eo amin'ny tasy ary avelao mandritra ny 15 minitra.
Nandeha ny fotoana, esory ny fangaro ary kobanina amin'ny rano mangatsiaka.
Avereno ireo dingana ireo mandra-pahalasan'ny tasy voatabia.
Farany, sasao toy ny mahazatra ny akanjo ao amin'ny milina fanasan-damba.
Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra haingana, saingy mety hahita fanapahan-kevitra tsy dia tsara ianao ary hanasarotra kokoa ny raharaha. Iray amin'ireo voajanahary voalohany rehefa mahazo tasy voatabia isika dia ny fampiasana napkin hanala ny taolam-paty, zavatra iray izay tsy isalasalana fa fahadisoana. Ny napkin dia nanaparitaka ny tasy ary manampy azy io ho velombelona tsara amin'ny kofehin-damba.
Aleo amin'ireto tranga ireto ny mampiasa sotro na antsy hanalana ny sisan'ny sakafo, tsy misy atahorana hiparitaka ilay tasy. Tsy tokony hampiasa ilay fanamainana koa ianao rehefa manasa ny akanjo voaloton'ny voatabia, satria ny hafanana dia manampy ilay tasy hametaka tsara ny tady amin'ny lamba. Rehefa manasa ny akanjo dia avelao ho maina amin'ny alokaloka izy mba hisorohana ny hafanana tsy hametraka ny tasy ary hihasarotra ny fanesorana azy.
Farany, raha misy tasy voatabia amin'ny fitafianao ary tsy misy mahomby aminao ireo fikafika ireo dia aza kivy. Alohan'ny hanandramana safidy hafa, eny fa na dia ny vokatra sasany manala tasy eny an-tsena aza dia miandrasa hanala ny vahaolana teo aloha. Izany hoe, sasao ny lamba dia avelao ho maina tanteraka. Avy eo ianao dia afaka manandrana fitaka hafa tsy misy atahorana hanimba ny fitafianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ahoana ny fomba fanesorana tasy voatabia
Tantara momba ny heloka bevava 6 izay mampifandray anao
Sintona amin'ny pharyngitis